Zonke izixhobo ezisemthethweni zeGoogle Pixel 3 | I-Androidsis
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo iGoogle Pixel 3 iboniswe ngokusemthethweni. Isizukulwana sesithathu seefowuni zikaGoogle siza kwintengiso sifuna ukulwa. Kweli nqaku Unokufunda yonke into ngezi zixhobo zimbini zenkampani. Kunye neefowuni zifikile ezinye iimveliso ezongezelelweyo, ukongeza kuthotho lwamanqaku, ukukhanyisa usuku lwabalandeli bezi fowuni.
Sidibene no uthotho lwezixhobo ecaleni kwale Google Pixel 3. Ukusuka kwizembozo ukuya kwii-headphone okanye kwitshaja entsha engenazingcingo. Sithetha nawe apha ngezantsi malunga neemveliso ezintsha esele zivelisiwe ngokusemthethweni.
1 Ukuma kwePixel kaGoogle
2 Iifowuni zeGoogle Pixel ze-USB-C
3 Amatyala asemthethweni kuGoogle Pixel 3
4 Ityala lam leGoogle Pixel 3
Ukuma kwePixel kaGoogle
I-Google Pixel 3 ifika kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo, ke kusengqiqweni ukuba itshaja engenazingcingo ithiwe thaca ukuba isebenzise yona kolu phawu. Kukuma kwePixel kaGoogle, efikelela kwi-10 W yentlawulo, nangona ayisiyiyo kuphela into ekufuneka ibalaselisiwe kule tshaja. Ukusukela ngelixa ifowuni igcwalisa, kuthotho lwemisebenzi emitsha iyasebenza.
Ngokusebenzisa iindlela ezimfutshane, kunokwenzeka ukufikelela kwimisebenzi efana nekhalenda okanye ukwenza ezinye iintshukumo, njengokuvula okanye ukucima izibane ekhaya, okanye ukulungisa iqondo lobushushu. Konke oku ngelixa ifowuni ibekwe kwisiseko sokutshaja ngokwesiqhelo.
Umbono kukuba ifowuni ime nkqo isebenzisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kodwa enkosi kule tshaja, iPixel 3 inokuthi ibe tyaba xa uyisebenzisa. Ke umsebenzisi uya kukhetha eyona nto intle. Iya kuphehlelelwa kwintengiso ngexabiso lama-euro angama-79.
Iifowuni zeGoogle Pixel ze-USB-C
Okwesibini, sifumana iseti yentloko yeefowuni zenkampani. Kancinci kancinci siyabona ukuba njani Uhlobo lwe-C lwe-USB lufumana ubukho kwintengiso yee-headphone, into eqinisekisiweyo ngezi ezivela kwinkampani. Yimodeli emele ubunzima bayo bokukhanya kunye nomgangatho omkhulu wokumamela ngawo onke amaxesha. Umdibaniso ofunwa ngabasebenzisi.
Ezi ntloko ze-Google Pixel 3 zinobunzima nje obuyi-15 yeegram, kwaye zisinika i-24-bit audio. Ukongeza, siya kuba nokufikelela kwimisebenzi efana nomncedisi kaGoogle ngendlela elula. Kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kumncedisi, kwaye siya kuba nakho ukumamela izaziso zethu okanye sikwazi ukufikelela kwimisebenzi efana nokuguqulela ngaxeshanye.
Ezi ntloko ziya kukhutshwa ziye kuthengisa Ixabiso le-35 nje yee-euro. Ngaphandle kwamathandabuzo into eyimfuneko kwabaninzi iya kuba yimfuneko.
Amatyala asemthethweni kuGoogle Pixel 3
Amatyala omnxeba amatsha nawo azisiwe, afana kakhulu nalawo aziswe kunyaka ophelileyo. Zombini malunga noyilo kunye nokusetyenziswa kwemathiriyeli. Siyabona ukuba amaqweqwe akhetha ukuthungwa okukhumbuza ijean. Ngokwemibala, inkampani izinikele ikakhulu kuluhlu lweethoni ye-pastel kunye nokungathathi hlangothi. Nangona umbala omtsha ukwaziswa.
Sifumana izembozo ezingwevu, ezipinki, ezimnyama kunye nezuba. Imibala emine abasebenzisi abaneGoogle Pixel 3 baya kuba nakho ukukhetha kuyo. Njengoko kulindelwe, iimeko zikulungele ukusebenzisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Ke akuyi kufuneka siyisuse ukuze sikwazi ukusebenzisa olu hlobo lwentlawulo kwifowuni. Azikuphazamisi kwimiphetho esebenzayo yesixhobo.
Ixabiso lekhava liyafana kuyo yonke imibala. Abo banomdla kubo baya kuba nakho ukwenza nabo ngexabiso lama-45 euros.
Ityala lam leGoogle Pixel 3
Ayizizo zigqubuthelo eziboniswe yinkampani. Kuba ikwakhona ukhetho lokwenza ngokwezifiso uyilo lwakho, ukuze ube netyala elikhethekileyo kwifowuni yakho. Uyakwazi ukwenza ngokwezifiso imeko yonke ngeenkcukacha ezinkulu, ukuze yonke into ithande wena. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukubheja okuhle kwinkampani.
Abasebenzisi abafuna ityala elizimeleyo kwiGoogle Pixel 3 baya kuba neendlela ezininzi. Bazokwazi ukufaka iifoto, kuyo nantoni na abayifunayo, yeqweqwe. Ke loo nto sele inobuqu. Kodwa, sinokukhetha phakathi kwemisebenzi yamagcisa, abayili okanye abafoti, kwaye siyisebenzise kwimeko enjalo. Okanye ukuba uyafuna, unokongeza indawo ekhethekileyo yakho kwikhava yakho. Iya kubandakanywa kuyilo ngale ndlela.
Njengoko kutyhiliwe, kuya kwenzeka ukuba ulicwangcise ngokupheleleyo eli tyala, Zombini ingaphakathi nengaphandle Ngokufanayo. Ngaphakathi sinokukhetha okumbalwa, kodwa singasebenzisa imibala emininzi (emnyama, epinki kunye nomhlophe). Ityala elinokuthi ukhusele ifowuni, kodwa loo nto yahlukile kwaye i-100% iyathandwa sithi.
Kule meko Ixabiso eliza kuba nalo la matyala alikhankanywanga. Sinethemba lokuva kuwe kungekudala. Njengakwimeko yangaphambili, iyahambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo kweefowuni, ukongeza kwimiphetho esebenzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Zonke izixhobo zikaGoogle Pixel 3